Wefdigii Sheikh Shariif iyo Xassan Sheikh oo la fasaxay – Puntland Post
Posted on November 10, 2019 November 10, 2019 by CCC
Wefdigii Sheikh Shariif iyo Xassan Sheikh oo la fasaxay
Wefdiga ay hoggaaminayaan madaxweynayaashii hore ee dalka Xassan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo saaka lagu xannibay garoonka diyaaradaha Muqdisho, ayaa sida la xaqiijiyay hadda loo fasaxay safarkoodi Beledweyne.
Wefdiga ayaa saacado ku xayirnaa garoonka, iyadoo diyaaraddii qaadi lahayd loo diiday in ay ka dhoofto garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kadib markii amar ka soo baxay dowladda la duldhigay maamulka garoonka in aysan fasixi Karin diyaaraddaasi.
Dowladda ayaa markii dambe ogolaatay in la fasaxo diyaaradda, islamarkaana wefdiga ay u amba-baxaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaasi oo ay gaarsiin doonaan gurmad loogu tala-galay dadka ku waxyeelloobay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyay Beledweyne.
Gurmadka waxaa bixiyay Madasha la baxday Xisbiyada Qaranka, oo ay ku midaysan yihiin inta badan Xisbiyada ka dhisan magaalada Muqdisho, kuwaasi lacag dhan $200,000 oo dollar ugu deeqay gurmadka fatahaadda Beledweyne.
Maxaa ka jira in Deni iyo Axmed Karaash ay ciidamo ku soo daabuleen Garoowe?
Madaxweyne Deni oo Villa Somalia ku eedeeyay in ay colaad ka hurinayso Somaliland
Dil Xalay ka dhacay magaalada Hargeysa
Puntland: Wasiiradii dhawaan la magacaabay oo la dhaariyey
PUNTLAND VICE PRESIDENT’S CONDOLENCES DELETED FROM FACEBOOK
PUNTLAND ACCUSES THE INTERNATIONAL COMMUNITY OF CLAIMING UNFOUNDED ASSISTANCE FOR THE SOMALI SECURITY SECTOR
PUNTLAND STATE RELAXES THE LOCKDOWN
AL-SHABAAB ASSASSINATES MUDUG GOVERNOR
PUNTLAND PARLIAMENT WILL RESUME SESSIONS TO RESOLVE CONSTITUTIONAL CRISIS